စုံစုံလင်လင် ဘာလီခရီးစဉ် (၅ရက်)KH - 4001
ဘာလီကို ပထမဆုံးအကြိမ်သွားမယ့်သူတွေ အတွက် အထင်ကရနေရာတွေကိုစုံစုံလင်လင်ပို့ ဆောင်ပေးမှာမို့အသင့်တော်ဆုံးခရီးစဉ်။
Day : 1 Yangon – Bali (light lunch @ airport or lunch on flight & Dinner)
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ နံနက်တွင် ထွက်ခွာပြီး၊ ညတွင် ဘာလီကျွန်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။ လေဆိပ်တွင်ကြိုဆိုကာ ညစာသုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ်တွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ နံနက္တြင္ ထြက္ခြာျပီး၊ ညတြင္ ဘာလီက်ြန္းသို႔ေရာက္ရွိပါမည္။ ေလဆိပ္တြင္ၾကိဳဆိုကာ ညစာသံုးေဆာင္ျပီး ဟိုတယ္တြင္အိပ္စက္အနားယူပါမည္။
Day :2Kintamani – Tampaksiring – Jimbarang Beach (Breakfast, Lunch & Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ ဘာလီကျွန်၏ အရှေ့ မြောက်ဘက်ရှိ Mt. Batur မီးတောင် ရှိရာ Kintamani ဘက်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ အွသားနှင့် အပြန်လမ်းတွို့တွင် ရှိနေသော အင်ဒိုနီးရှားပါတိတ်ဆိုင်၊ ပန်းပုဆိုင် အပြင်၊ Tampksiring Holy water temple သို့ဝင်ရောက်လေ့လာလည်ပတ်ကြကာ ညနေတွေင် Jimbarang ကမ်းခြေတွင် ညစာသုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ်တွင် ပြန်လည်အနားယူကြပါမည်။
ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာ ဘာလီက်ြန္၏ အေရွ ႔ ေျမာက္ဘက္ရွိ Mt. Batur မီးေတာင္ ရွိရာ Kintamani ဘက္သို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ပါမည္။ အြသားနွင္႔ အျပန္လမ္းတြို႔တြင္ ရွိေနေသာ အင္ဒိုနီးရွားပါတိတ္ဆိုင္၊ ပန္းပုဆိုင္ အျပင္၊ Tampksiring Holy water temple သို႔၀င္ေရာက္ေလ႔လာလည္ပတ္ၾကကာ ညေနေတြင္ Jimbarang ကမ္းေျခတြင္ ညစာသံုးေဆာင္ျပီး ဟိုတယ္တြင္ ျပန္လည္အနားယူၾကပါမည္။
Day :3Bedugul – Ulun Danu – Tanah Lot (Breakfast, Lunch & Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီး Bedulgul ရှိ Ulun Danu Temple ပြီးလျှင်သစ်သီနှင့် ပန်းဈေးသို့ဝင်ပြီး နာမည်ကျော်ကြားလှသော Tanah Lot သို့သွားပြီး လှပသော ရှုခင်းကိုခံစားပြီးလျှင် ပင်လယ်စာ ညစာ သုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ်တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
ဟုိတယ္တြင္ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီး Bedulgul ရွိ Ulun Danu Temple ျပီးလွ်င္သစ္သီနွင့္ ပန္းေဈးသို႔ဝင္ျပီး နာမည္ေက်ာ္ၾကားလွေသာ Tanah Lot သို႔သြားျပီး လွပေသာ ရွဳခင္းကိုခံစားျပီးလွ်င္ ပင္လယ္စာ ညစာ သံုးေဆာင္ျပီး ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။
Day :4Nusa Dua & Kuta Beach (Breakfast, Lunch & Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီး Nusa Dua ကမ်းခြေတွင်အနားယူပါမည်။ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် Kuta ကမ်းခြေတွင် အေးအေးဆေးဆေး အနားယူပြီး ဟိုတယ်တွင် ပြန်လည်အနားယူပါမည်။
ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီး Nusa Dua ကမ္းေျခတြင္အနားယူပါမည္။ ေန႔လည္စာသံုးေဆာင္ျပီးလွ်င္ Kuta ကမ္းေျခတြင္ ေအးေအးေဆးေဆး အနားယူျပီး ဟိုတယ္တြင္ ျပန္လည္အနားယူပါမည္။
Day :5Bali – Yangon (Breakfast & Lunch)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ်မှထွက်ကာ လေဆိပ်ဆင်းပြီး ရန်ကုန်သို့ပြန်ပါမည်။
ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ျပီး ဟိုတယ္မွထြက္ကာ ေလဆိပ္ဆင္းျပီး ရန္ကုန္သို႔ျပန္ပါမည္။
1. International flight fare for round trip
2. Hotel accommodation for 4nights with twin sharing basis
3. Meals as per itinerary (no drinks)
4. Transportation as mention in the itinerary
5. English speaking guide & Myanmar Tour leader
6. Entrance & Zone fees as in itinerary